Androany amin'ny tantara: 9 Oktobra Ny fiara fitiliana voalohany ao amin'ny Tunnel 2016 Eurasia ... - RayHaber
HomeANKAPOBENYAndroany ao amin'ny Tantara: 9 Oktobra Ny fizotry ny fizahan-toetra voalohany tao amin'ny Eurasia Tunnel ras
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş ANKAPOBENY, TORKIA, Androany teo amin'ny tantara 0
9 Oktobra Nanome an'i M. Alfred Kaulla ny fifanekena ny tsipika 1890 Thessaloniki-Monastery. Nomena an'i Feriz amerikanina teo aloha io.
9 Oktobra 1918 Toros sy ny torolàlana Amanos dia vita. Ny fananganana azy dia nanomboka tamin'ny 1914.
9 Oktobra 1940 Tender ho an'ny fanamboarana ny zotra Elazığ-Palu 5 hatramin'ny TL tapitrisa Haymil İnş. Ltd. SRK. Ary nomena.
9 Oktobra Oktobra Ny Recep Tayyip Erdoğan dia nanao ny fitsapana voalohany ho azy ao amin'ny Tunnel Eurasia.
Androany amin'ny tantara: 9 Oktobra 2016 dia nandray ny fizaham-pitsapana voalohany tao amin'ny Eurasia Tunnel ... 09 / 10 / 2017 Androany tao amin'ny Tantara 9 Oktobra Nalefa tamin'i M. Alfred Kaulla ny fandefasana ny 1890 Thessaloniki-Monastery, izay niasa ho an'ny vondrona Alemana iray niaraka tamin'ny Banky Deutsch. Nomena an'i Feriz aloha ny Amerikana. 9 Oktobra 1918 Toros sy tunnel Amanos dia vita. Nanomboka ny fananganana tao amin'ny 1914. 9 Ôktôbra 1940 Fanehoam-panamboarana ho an'ny fanorenana ny tondrozotra Elazığ-Palu 5 ho TL Mio Haymil İnş. Ltd. SRK. Ary nomena. Ny Filoha Recep Tayyip Erdoğan tamin'ny 9 tamin'ny volana Oktobra dia nanao ny fizaham-pahasalamana voalohany tao amin'ny Tassel Eurasia.
Tiorkia tram an-toerana voalohany 'silkworm fitsapana fiara dia hahatonga ny Praiminisitra 27 / 11 / 2012 Tiorkia tram an-toerana voalohany 'silkworm tonga any amin'ny dingana vita ny fitsapana, rehefa avy nahazo ny fankatoavana ilaina mba ho alaina any amin'ny lalamby ny lalamby voalohany fiara fitsapana fiara dia hanao ny Praiminisitra Recep Tayyip Erdogan tamin'ny tatitra. Bursa Recep Altepe ben'ny tanàna, ny faharetan'ny asa fitsapana Bursaray Care Center ao Torkia tram an-toerana voalohany 'silkworm nilaza fa amin'ny farany mavitrika sehatra ny fitiliana. Taorian'ny fiafaran'ny fitsapana dia nametraka ny fiara teo amin'ny arabe, izay manondro fa ny Altepe fiara dia nilaza hoe: '' Rehefa vita ny asa ilaina amin'izao fiara izao, dia manantena ny handalo fitsapana ara-dalàna. Avy eo dia manomboka ny fizotry ny fanandramana amin'ny fitsapana. Misy fikambanana iraisam-pirenena maromaro. Ity dia ho antsika sy ny orinasa eto ...
Vokarina in Bursa, Torkia ny teratany voalohany tram silkworm 's praiminisitra dia hahatonga ny fiara fitsapana 28 / 11 / 2012 Tiorkia voalohany teratany tram vokarina any Bursa silkworm ny fanadinana hanao ny praiminisitra ny mitondra fiara Tiorkia voalohany teratany tram silkworm ny fitsapana izay tonga amin'ny dingana vita amin'ny voalohany andrana fiara teny an-dalana vy dia alaina any amin'ny lalamby fiara rehefa avy nahazo ny ilaina fankatoavana ireo tatitra Praiminisitra Recep Tayyip Erdogan hanao . Bursa Recep Altepe ben'ny tanàna, ny faharetan'ny asa fitsapana Bursaray Care Center ao Torkia tram an-toerana voalohany 'silkworm nilaza fa amin'ny farany mavitrika sehatra ny fitiliana. Taorian'ny fiafaran'ny fitsapana dia nametraka ny fiara teo amin'ny arabe, izay manondro fa ny Altepe fiara dia nilaza hoe: '' Rehefa vita ny asa ilaina amin'izao fiara izao, dia manantena ny handalo fitsapana ara-dalàna. Avy eo ny dingan'ny fanamarinana ny fanadinana dia manomboka.
AdaRay dia manao ny dingana voalohany 27 / 03 / 2013 AdaRay no nanao ny fizotry ny fizaham-pahalalana voalohany Ny asan'ny Metropolitana eo anelanelan'i Train Station Adapazarı sy Arifiye dia vita ho an'ny fiarandàlan'ny lamasinina. Vita ny fiarandalamby nomanina tao TÜVASAŞ ary dia napetraka ny fiara voalohany. Ny toeram-pamokarana natsangana teo anelanelan'i Adapazarı sy Arifiye tao anatin'ny sehatry ny rafi-dalam-pitaterana an-drenivohitra dia vao haingana. Vita ny fiarandalamby tao TÜVASAŞ. Ny fiara fitateram-bahaka sy fiara, izay niakanjo tao amin'ny TÜVASAŞ ho an'ny fitateram-pitaterana entana, izay ho tanteraka amin'ny anaran'i AdaRay, izay manintona ny saina sy ny fampiononana ary ny fanamafisana ny test 11.00 androany. Taorian'ny fotoana ela, nitifitra indray ny fiaran-dalamby, namakivaky ny lalamby AdaRay ...
Fihetseham-po amin'ny tontolon'ny Eurasia (Video) 09 / 10 / 2016 Ny fiara fitiliana dia natao tao amin'ny Tananan'i Eurasia: Ny fitsidihan'ny filoha Recep Tayyip Erdoğan dia nitsidika ny tranobe fanorenana an'i Tunnel Eurasia izay kasaina hotokanana amin'ny volana Desambra. Erdogan, ny praiminisitra Binali Yildirim sy ny minisitry ny fitaterana, ny raharaham-bahiny ary ny fifandraisana Ahmet Arslan, dia nandalo ny tonelina ary nahazo vaovao avy amin'ny manampahefana. Raha niteny taorian'ny fotoam-pitsapana ny filoha Erdogan, "Na dia mbola mitohy aza ny fampiasam-bola rehetra," hoy izy. Ny fanokafana ny fanandramana fitsangatsanganana Tunnel 20 Eurasia, izay hotontosaina amin'ny filoham-pirenena Erdogan, ny volana Desambra, "Ny vahoakantsika dia hahatakatra ny zavatra andrasana mandritra ny taonjato maro. XMUMX Oktobra 20'ten XMUMX tapitrisa Marmaray avy any Azia mankany Eoropa, Eoropa, dia lasa ny kaontinanta Azia. tena ...
Androany amin'ny tantara: 9 Oktobra 2016 dia nandray ny fizaham-pitsapana voalohany tao amin'ny Eurasia Tunnel ...
Tiorkia tram an-toerana voalohany 'silkworm fitsapana fiara dia hahatonga ny Praiminisitra
Vokarina in Bursa, Torkia ny teratany voalohany tram silkworm 's praiminisitra dia hahatonga ny fiara fitsapana
AdaRay dia manao ny dingana voalohany
Fihetseham-po amin'ny tontolon'ny Eurasia (Video)
Androany amin'ny tantara: 31 Aogost 2016 Ny fiatrehana fitsapana voalohany an'ny Keçiören Metro ...
Apaydın, Tepeköy-Selçuk IZBAN Line no nanao ny fiatrehana fitsapana voalohany
Ny Filoha Ay dia nanao ny fizotry ny fitsapana ny Nostalgic Tram
Ny Minisitra Arslan dia manaparitaka ny baikon'ny Başkentray
Ny minisitry ny fitantanam-bola Mehmet Şimşek dia nanao ny fizaham-pahasalaman'ny Gaziantep Metropolitan Light Rail System